कान चिलाएर हैरान हुनुभएको छ ? अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपाय – ramechhapkhabar.com
कान चिलाएर हैरान हुनुभएको छ ? अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपाय
के तपाईँको कान बारम्बार चिलाउँछ ? कान चिलाउनुको विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । इन्फेक्सनको कारण पनि कान चिलाउने गर्दछ । कतिपय मानिसहरु जे पायो त्यसले कान कोट्याउँछन् जुन विल्कुल गलत हो । इन्फेक्सनको अलवा भित्री कानमा कानेगुजीका छ वा छाला सुख्खा भएको छ भने पनि कान चिलाउने गर्दछ । कान मानिसको संवेदनशील भाग मानिन्छ । यसर्थ कानको सुरक्षा गर्नु अतिआवश्यक छ ।
यसर्थ कान चिलाउने समस्याबाट मुक्त हुनका लागि निम्न घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ :
अधिकांश मानिसको घरमा घ्युकुमारीको बोट हुन्छ । यसको प्रयोगले पनि कान चिलाउने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । टाउको एकतिर झुकाएर कानमा घ्युकुमारीको रस ३÷४ थोपा राख्ने । घ्युकुमारीको रस बाहिर निस्कन नदिन केहि समयसम्म टाउको नउठाउने । घ्युकुमारीको रसमा भएको एन्टी इन्फ्लेमेट्री गुणले कानको सुख्खापन हटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
कतिपय तेलको प्रयोगले पनि कान चिलाउने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । शुद्ध नरिवलको तेल, जैतुनको तेल कानमा राख्दा पनि यसले कानको सुख्खापन हटाउन सहयोग गर्दछ ।
लसुनको धेरै गुणहरु छन् जुन हामीलाई थाहा भएको पनि हुनसक्छ । लसुनमा एन्टीबायोटिक र पिडामा राहत दिलाउने गुण हुन्छ । तातो जैतुन वा तिलको तेलमा एक केस्रा लसुन काटेर राख्ने । लसुन निकालेपछि उक्त तेल कानको बाहिरी भागमा लगाउँदा यसले आराम दिन्छ ।
ग्याष्टिकको समस्या हुनेको पेट फुल्नु सामान्य हो । धेरै व्यक्तिहरूमा यो समस्या अक्सर हुन्छन्, जसको कारण उनीहरुलाई यो चिन्ताको बिषय बन्दछ । जब हामी खाना खान्छौं, हाम्रो पेटमा एसिडले तिनीहरूलाई एकदमै टुक्रा टुक्रा पार्दछ। पाचनको यस प्रक्रियाको दौरान, पेटबाट ग्यास बाहिर आउँछ जिसके कारण कहिलेकाँहि सुन्निन्छ र पेट दुख्छ। ग्याष्टिक हुनुको केही कारण छ ।
आवश्कताभन्दा बढी खाना खानाले पनि ग्याष्टिकको समस्या हुन्छ । खाने र पिउने समयमा पेटमा वायु पस्नाले पनि यो समस्या हुन्छ । धुम्रपान, मसलादार र भुटेको खानाले पनि यो समस्या निम्याउँछ । समयमा नखाँदा वा लामो समयसम्म भोको रहनु पनि एउटा कारण बन्न सक्छ । जससकारण यी कुराहरुमा ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। केही घरेलु चीजहरूले ती समस्याहरूबाट तुरुन्त राहत दिन्छ। हामी उनीहरूको बारेमा जानौं।